Oshọrọ ụgbọ ala, ọgba tum tum | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Nchịkọta: Nhọrọ nke ụgbọ ala, ọgba tum tum
Ihe dị mma ịzụta Mercedes Vito ma ọ bụ Volkswagen Transporter sitere na usoro ọhụrụ - site na 2003g. Ma ọ bụ ikekwe Opel Vivaro?
Kedu ihe ka mma ịzụta Mercedes Vito ma ọ bụ Volkswagen Transporter site na usoro ọhụrụ - site na 2003g. Ma ọ bụ ikekwe Opel Vivaro? ya na ogwe-aka nile na ukwu nile maka njem nke T4 na T5. Ọ bụrụ…
Gịnị bụ Sedan na Hatchback? Kedu ihe dị iche?
Gịnị bụ Sedan na Hatchback? Kedu ihe dị iche? O doro anya na ọ dịghị mkpa ka ị mara nke a. Ọfọn, ịkwesighi ịnwe ụgbọ ala ebe ọ bụ na ị rịọrọ otu kpo ọkụ kpụ ọkụ n'ọnụ maka sedan, na okpu maka ụgbọ ala ...
Gwa m biko, ebe a na-achịkọta POLO sedan?
Gwa m biko, ebe a na-achịkọta POLO sedan? Ị ka na-eche na ụgbọala ndị dị na Russia na-anakọta site na ndị aṅụrụma na ndị sledgehammers, na nkwado nke ndị na-aṅụbiga mmanya na-abaghị uru mmanya na-aba n'anya? Na Kaluga. ...
Chlamyda manada gini bu nka?
mantle manada gini bu ihe a? Nke a dị na ngalaba dị iche))) Chlamydomonas planning: 1. Flagella 2. Vacuoles3. Cell mgbidi4. Peephole5. Kernel6. Pyrenoid bụ nke mkpụrụ ndụ na - agbasa, usoro nke inwe mmekọahụ - ma ọ bụ heterogamy, n'ụfọdụ oge.
Ego ole ka ụtụ isi na 300 ịnyịnya ga-efu kwa afọ?
Ego ole ka ụtụ isi na 300 ịnyịnya ga-efu kwa afọ? N'ihe dị ka puku 30, ebe m nwere Landik 200 288. na-ebe ákwá na 25 Plus iji tụọ ụtụ hay, oats na afụ ...
Ị nwere ikike maka Irbis ttr 125 Pitbike? N'ebe ọ bụla ha dere na ikike ndị ahụ adịghị mkpa na ụdị A. Ọtụtụ na-ede na ha dị ha mkpa. Ònye ga-ekwere?
Ị nwere ikike maka Irbis ttr 125 Pitbike? N'ebe ọ bụla ha dere na ikike ndị ahụ adịghị mkpa na ụdị A. Ọtụtụ na-ede na ha dị ha mkpa. Ònye ga-ekwere? Ọ bụghị ịlụ ọgụ na-achụ obodo gaytsam anaghị eche 😀 ma ọ bụrụ ...
Kedu otu esi achọta ezigbo ọrụ?
Kedu otu esi achọta ezigbo ọrụ? Otu esi achọta ezi ọrụ bu ihe ndi mejuputara na onye choro ime. Ndị isi ọrụ nchọta ọrụ mgbe ịchọrọ ọrụ nwere ike kewaa n'ime ìgwè atọ: * njehie na nyocha ọrụ, ...
Kedu ihe dị mma Dodge Challenger, Ford Mustang ma ọ bụ Chevrolet Camaro ss ???
Kedu ihe dị mma Dodge Challenger, Ford Mustang ma ọ bụ Chevrolet Camaro ss ??? Camaro onye na-ama aka na mustang, ha nwekwuru ike, Camaro jere ije dịka onye na-elekọta 302 nke na-eme ihe nkiri douche ford ...
Gwa m otu ezigbo aha Mercedes “Gelik” jeep ma kedu ọ na-eri?
Gwa m otu ezigbo aha Mercedes “Gelik” jeep ma kedu ọ na-eri? Steyr Daimler Puch Gelandewagen yana Mercedes, o nwere mmekọrịta na-enweghị atụ, ụgbọ ala ahụ bụ ndị Austrian. Pricegwọ nke ngwaọrụ dị mma ...
Anyị na-azụ Volkswagen Golf nke isii nke ọgbọ (2009-2013 afọ)
Ihe na 15.05.2018
Volkswagen Golf maka ọtụtụ ụmụ amaala anyị bụ ndị mbụ ụgbọ ala ọzọ. Ná ngwụsị nke 90-nwe ihe onwunwe nke "abụọ" Golf bụ ọnụ. Oge agafeela ọtụtụ mgbe ahụ, ma ịhụnanya nke Goofu ...
Gbasara Ịntanetị ma ọ bụ Mitsubishi ASX ??? Kedu nke ka mma ma kwadoro! ? ; Daalụ gị n'ọdịnihu! ..
Gbasara Ịntanetị ma ọ bụ Mitsubishi ASX ??? Kedu nke ka mma ma kwadoro! ? ; Ana m ekele gị tupu oge a! .. Igwe ndị a hà nhata na klas ahụ, ihe m chere bụ QASHQAI dị mfe ma dị iche, dị ka Lancer Yulia hello! ...
Kedu ihe “ebipu” pụtara na ngalaba Ahịrị?
Kedu ihe “ebipu” pụtara na ngalaba Ahịrị? Bee ụgbọ ala, nke a bụ ụdị ọhụụ na - eme ka ego ghara ịdị na ya. Ihe nkenke idozi ụgbọ ala nke nwere mbepu bụ dollar 600. Principlekpụrụ nke ọrụ bụ nke a: ịnwere ụgbọ ala ochie na akwụkwọ ...
Mee ụgbọ ala ugbu a na Russia?
A na-emepụta ọgba tum tum ugbu a na Russia? A na-emepụta Stealth ụlọ ọrụ igwe kwụ otu ebe na Moscow Baltmotors na-anakọta China site na Kaliningrad; otu ọnọdụ ahụ dị na mba ahụ. Na Belarus, Minsk wepụtara ụdị ọhụụ,…
Ọ ga-amasị m ịnụ nzaghachi site n'aka ndị nwe ụgbọ ala China
Ọ ga-amasị m ịnụ nzaghachi site n'aka ndị nwe ụgbọala ụgbọala China. Nke a bụ nyochaa onye agbata obi Ku-Ku. Site na 3 puku kilomita. e kpuchiri generator ahụ n'okpuru akwụkwọ ikike, ma ọ na-efu ya nnukwu ego na akwara. niile ...
karịa Bogdan dị iche site na 2110 vases technically, na mma
etu Bogdan si di iche na 2110 vases nke teknụzụ, na ịdị mma -Ọdọrọ ụfọdụ ụgbọ ala Bogdan sitere na Lada Priora (struts, isi iyi, na ngbanwe ụfọdụ na nkwado nke struts n'ihu) .- Ihu ihu na ihu ọma ...
Enwere usoro mgbagharị moto na nnyefe akpaka? Ego ole ka ọrụ ebube a dị?
Enwere usoro mgbagharị moto na nnyefe akpaka? Ego ole ka ọrụ ebube a dị? Anụrụ m, ma ahụghị m anya m. Ahụrụ m ndị na-eme egwuregwu na-aga, ma ha ahụghị Mozzikov ndụ. na saịtị ahụ rere ndị China ...
kedu ka esi akpọ lamborghini ma ọ bụ lamborghini?
Etu esi akpọ lamborghini ma ọ bụ lamborghini? Lamborghini! Thegụ “gh” n'asụsụ soundstali dị ka “g”. ya mere, Lamborghini. yana spaghetti - spaghetti na ọ bụghị spaghetti. Mụta asụsụ). Lamborghini !!!! Lọ ọrụ, ...
Knowsnye mara ihe ụgbọ ala akwara bụ ???
Knowsnye mara ihe ụgbọ ala akwara bụ ??? carsgbọ ndị dị ike, gt; 200 hp, dịka ọmụmaatụ, Shelby, Ford mustang, chevrolet camaro Muscle Car (ụgbọ ala mọzụlụ Bekee), ma ọ bụ klas ụgbọ ala akwara dị na USA…
Kedu ihe oriri mmanụ maka Hummer 2?
Kedu ihe eji eme mmanụ ọkụ na Hummer 2? N’elu igwe dị arọ, ọ dabere na ọnụọgụ nke osooso. Kedụ ka ị ga-eji laa ... Mana 20-chka kwesiri ịnọ ... ihe dị ka lita 30 nke 25 na 100 km. ...
Kedu ihe bụ ezigbo mmanụ ụgbọala nke Oka? Naanị n'eziokwu.
Kedu ihe bụ ezigbo mmanụ ụgbọala nke Oka? Naanị n'eziokwu. na atụmatụ m nke lita 5-6, ọ bụghị karịa 7 kwesịrị ịbụ. Ọ bụ subcompact. Na paspọtụ: na obodo 6,4 l / 100 km, n'okporo ụzọ ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,361.